Mabhuku akanakisa emari yekutsinhana | Ehupfumi Zvemari
Kuisa mari mumusika wemasheya kunoda ruzivo rwakateedzana kana iwe uchida kuita mashandiro neimwe nzira yekuvimba. Nekuti zvinogona kukutungamira iwe kuti uite sarudzo dzinokuvadza zvaunofarira semudhara mudiki nepakati. Chero zvazvingaitika, une akati wandei nzira kugadzirisa izvi zvinodiwa kudzidza ku kubudirira kubudirira mune mazhinji emabasa ako mumisika yemari. Kwete pasina, haukwanise kukanganwa kuti imari yako yauri kutamba uye mupfungwa iyi unofanirwa kuchengetedza kufamba kwese kwauchazoita kubva zvino zvichienda mberi.
Zvichida izvo zvausina kufunga nezvazvo panguva ino ndezvekuti kudzidza uku kunogona kuitwa kuburikidza nemabhuku. Kwete chete iyo ichakubatsira iwe kuti uve nenguva inonakidza kwazvo, asi iwe unozogona kukamisa kuverenga kwayo kuburikidza nekuwedzera kunobatsira mashandiro. Kwete pasina, iwe unenge uine chimiro chakazara kuti uwane mhinduro zvakanyanya zvinoenderana nezvaunotarisira. Kunyangwe zvichizonyanya kudikanwa kuti iwe uite chakakosha kusarudzwa kwemabhuku emasheya Kuti ivo vanokupa iwe akanakisa mazano ekuti kuita kwako kuitise basa mumusika wemasheya kubva zvino zvichienda mberi.
Ehe kune mabhuku mazhinji izvo zvirimo zviri kudyara mumusika wemasheya. Asi havazi vese vanozotarisisa zvaunotarisira. Mune zvimwe zviitiko, nekuti kuverenga kwerudzi urwu misoro kazhinji kunonetsa zvakanyanya uye kune vamwe nekuti havana zvirimo zvinokupa chivimbo. Pakati pezvimwe zvikonzero, zviri kukonzerwa nenyaya yekuti dingindira iri rinonyanya kutarisana nekurova uye kunyanya kugutsikana. Kusvika padanho rekuti ivo vanokwanisa kupfuura kukubatsira iwe, kukuvadza iwe munzira dzaunenge uchizoita mumisika yemari.
1 Masheya ekutsinhana emadhamu
2 "Investment mumusika wemasheya"
3 "Urarame nekutengesa"
4 "Shumba dzinopesana nemhara"
5 Kufamba uchidzika Wall Street
6 "Inoshamisa nyika yemari uye yemusika wemusika"
Masheya ekutsinhana emadhamu
"Bhegi reDummies" nderimwe remabhuku akakodzera kwazvo kune avo vane ruzivo rushoma rwemisika yemari. Izvo zvakanyorwa naJosef Ajram kuitira kuti kuburikidza ne mutauro wakajeka uye wakananga unogona kuzvinzwisisa kubva papeji rekutanga. Izvo chaizvo hazvipe hunyanzvi kana manenji nzira dzekuita mari mumisika yemari. Kana zvisiri, pane kudaro, ndezvekupinda mune ino chikamu icho chikamu chevanhu chisina kana ruzivo chero rwerudzi urwu rwemimwe misoro.
Iri bhuku rine dzidziso yekutanga pamusoro pekushanda kwemusika wemasheya, inotsanangurwa nenzira inonzwisisika kune chero munhu. Kubva chaiyo kongiri mienzaniso uye izvo zvinogona kukutora iwe munyika inogara yakaoma uye hukama nemari. Zvirokwazvo pasina mashiripiti yekubika, kwete kunyangwe neyakaomesesa nzira dzekudyara. Izvo zvinopesana, ibhuku revatangi vanoda kuita yavo yekutanga kutengeserana mumusika wemasheya.
"Investment mumusika wemasheya"
Iri ibhuku rakati tsvikinyidzei rinoenderera zvakanyanya nekutsvaga maturusi ezvigadzirwa kuitira kuti iwe ugone kuita mari mubhizimusi remusika wemasheya. Chero zvazvingaitika, harisi bhuku rekushandisa, asi zvinopesana inomira pamusoro pezvose nekuda kwayo. Kunyangwe ichiitirwa vashandisi vanotova nekumwe kudzidza mune mhando iyi yekushanda. Ehezve, iwe unofanirwa kuverenga bhuku iri zvakadzikama kuti uwane zvakanyanya kubva pane zvarinodzidzisa. Uye kuti iwe unokwanisa kugadzirisa kubva zvino zvichienda mberi nekuti iwo mazano anoshanda zvakanyanya kuti usatore nguva yakareba kuti ugadzirire.
Chero zvazvingaitika, bhuku iri nderimwe rezvirevo zvekutenga nekutengesa zvikamu pamusika wemasheya. Iwe haugone kukanganwa kuti iwe unogona nyore kudzidza zvese iwo manomano uye maitiro ekutenga nekutengesa masheya zvinobudirira chaizvo. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchimiro chakanakisa kupinza zivo ine simba kwazvo pamusika wemasheya. Hazvishamise kuti, chinangwa chavo ndechekuti iwe utonge mari yekudyara kubva panguva yekutanga.
Kune vateereri vakasiyana bhuku iri rakagadzirwa, iro rinoitika kunge hunyanzvi kupfuura hwekare. Hazvishamise kuti, inovavirirwa pachimiro chakanyatso tsanangurwa chehuwandu hwevanhu. Sezvazviri mune ino kesi yeyevanofungidzira vatengesi vanosarudza iyo kutsanya kutengesa. Ndokunge, zvatinoziva tese sekutengesa. Saka kuti iwe ugone kutowana raramo kubva pane ino chiitiko mune akasarudzika makesi. Iko kusununguka kwekuverenga kunosanganisirwa nedzimwe nzira dzehunyanzvi mukuparadzira kwayo.
Chero zvazvingaitika, bhuku iri rinozivikanwa nekuti Alexander Mukuru, anova iye munyori webasa rehunyanzvi, anoedza kuunza dzidziso dzake kune chero mushandisi. Kunyangwe idzo vane kudzidza kushoma mukirasi ino yekushanda mumisika yemari. Kune rimwe divi, ine chikamu chinonakidza umo icho chinotaura nezve chartism, zvehunyanzvi zviratidzo uye zvekutengesa masisitimu. Kune yechokwadi inoshuvira shark yemisika yemari.
"Shumba dzinopesana nemhara"
Rimwe remabhuku nekubudirira kukuru mumakore achangopfuura uye izvo zvakatanga kubva pane zano nemumwe wevanoongorora zvemari anonyanya kuzivikanwa nevadiki vepakati nepakati vakaita saJosé Luis Cárpatos. Iri ibasa rekumanikidzwa kusheedzera kuti usaite zvikanganiso zvakakura mumisika yemari. Kubva pane ino mamiriro, inogona kukudzidzisa iwe kugadzira akanyanya kusiana nzira dzekudyara. Kubva pane yakaomesesa, uko manhamba ane hunyanzvi anonyanya kutariswa, kune echinyakare masisitimu akaiswa kubvira hupenyu hwese.
Icho chinhu chinogona kubatsira zvakanyanya kana iwe uchizotengesa misika yemasheya neimwe frequency. Kusvika padanho rekuti mumavhiki mashoma kana pamwe mwedzi unenge uine hunyanzvi hwekuziva mune zviitiko zvipi unofanira kana kuti kwete yemisika yemari. Kwete pasina, zvinokupa iwe zano rakakosha sekunge iwe uchavandudza kuti iwe unogona kugadzirisa iyo yekupinda uye yekubuda mitengo mumisika dzakasiyana dzemari. Iri ibhuku rekutanga kana chikamu ichi, senge musika wemasheya, uri kuzoritora zvakanyanya kubva ikozvino.
Kufamba uchidzika Wall Street
Iyo inoumbwa seimwe yemaitiro akakwana ekudyara mumusika wemasheya zvinobudirira. Iri bhuku, rakanyorwa nemushambadzi ane mukurumbira Burton Malkiel, rakagadziridzwa pamusoro pemakore sezvo kudyara kwemazuva ano kwafambira mberi. Kusvika uchipa nzira dzepamberi senge yakakosha uye yehunyanzvi kuongorora. Sezvo achizadzikisa chinangwa chakakosha uye ndiko kuti achakukoka kuti ufungisise. Pakati pezvimwe zvikonzero kuitira kuti iwe ugone kugona kunzwisisa ins uye kunze kwemisika. Ichava nemhedzisiro yakanangana pamitambo yako uye kuti ichave yakanyanyisa uye mhedzisiro ichave iri nani kupfuura nakare.
Ehezve, iri bhuku rakaoma kuverenga uye ungangoda rubatsiro rwakawedzerwa kuti uwane nzira dzese dzarinopa kuti uwane mari yakanaka kwazvo. Asi kana pakupedzisira uchikwanisa kukunda chiitiko chidiki ichi, unenge uine ivhu rakawanda rakawanikwa kuti uzviise mumabasa ako ese anotevera mumisika yemari. Hazvishamisi kuti inogona kunge iri iyo bhuku remusoro kuve ane ruzivo mudiki nepakati investor. Izvo izvo zvaisingafanire kunge zvichishayikwa muhofisi yako patafura yebasa. Unogona kuwana mabhenefiti mazhinji nekuverenga.
"Inoshamisa nyika yemari uye yemusika wemusika"
Rimwe remazita risingafanirwe kushayikwa muraibhurari yako kana kubva zvino uchida kuve investor ane ruzivo. Iyo yakanyorwa nerunako rukuru neumwe wevakuru vanoziva veiyi yakakosha nzvimbo yekudyara. Tiri kutaura kuna Andre Kostolany uyo anoratidza kukosha kweiyo mari yehunyanzvi kuongorora. Kusvika padanho rekuti mubhuku iri anounganidza akati wandei matipi ekuisa mukuita. Pamusoro pekupa iyo yakazara fomu yezvinofanirwa kuve mari ino panguva ino.
"Sikana nhema" nderimwe remabhuku akakosha kuti atange kushanda mumisika yemari. Pasi pechisungo chaNassim Taleb, muenzaniso unobatsira kwazvo nzwisisa chokwadi chemisika yanhasi. Iwe haugone kukanganwa kuti zvinobatsira kufunga nezvechiono chaunogona kuva nacho chemisika yemari kuitira kuti ugone kushanda zvinobudirira navo kubva zvino zvichienda mberi. Chero zvazviri, icho chinofanirwa-kuverengerwa chero munhu anoda kudzidza nzira yekudyara mumisika yemasheya. Sezvo zvingave mune yako kesi uye nenzira iyi ita kuti yako wega zvinhu zviite purofiti.
Uye kupedzisa "Bhegi kana hupenyu" nderimwe remabhuku anonyanya kubatsira aunazvo muzvitoro zvemabhuku kuti uone misika yemasheya nemisika kubva kune kwakasiyana maonero uye pamwe zvine hukasha kupfuura mamwe ese. Chaizvoizvo kunyepedzera kuwana zvishoma kupfuma kuburikidza nekudyara mumisika yemari. Neimwe imwe pfungwa iyo inogona kuve inonakidza kwazvo iwe yaunogona kuita mukati megore rino mukurovedza muviri. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchimiro chakanakisa kupinza zivo ine simba kwazvo pamusika wemasheya. Kuti pakupera kwezuva ndechimwe chezvinangwa zvekutanga zvemabhuku aya zvehombodo yataunza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Mabhuku akanakisa emari yekutsinhana
Ndezvipi zvigadzirwa zvemari zvaunogona kudyara mumari?